Myanmar Gays Heaven: Video Collection 12
Posted by Myanmar Gays Heaven at 2:21 AM
Lucolinn May 13, 2013 at 9:38 PM
အဲလိုမျိုး အလိုးခံချင်လိုက်တာကွာ၊ တော်တော်နာမှာ ဘဲနော်။
Nyi Phyo June 2, 2013 at 2:23 PM
chon June 8, 2013 at 10:51 PM
chitzaw June 17, 2013 at 6:05 PM
Nyi Phyo ဆက်သွယ်ပေးပါ 09 3104 2197 စိတ်တိုင်းကျ ရန်ကုန်က
Fredy but November 7, 2013 at 5:02 AM
wanna suck 0178887208(Malaysia) Wanna Fuck Me
တစ်ယောက်နဲ့ခင်ချင်ပါတယ်ဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်သက်လုံးပေါ့ အကောင့်လေးများရှိရင်ပေးနိုင်ပါတယ်...
ခင်ချင်ရင် yanlintun1992@gmail.com ကိုအက်လိုက်ပါ. . .
ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်ကပါခင်ဗျာ...ခင်ချင်တဲ့သူလည်းရန်ကုန်ကဆို ပိုကောင်းပါတယ် အသက်က 23 ပါ ချောတယ်လို.ပြောလို.ရလောက်တဲ့ရုပ်ရည်လဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်...အကောင့်လေးများရှိရင်တော့ ပေးနိုင်ပါတယ်
john Mss. October 15, 2013 at 6:37 AM
u wanna get up or down.my facebook account is mininzali89@gmail.com
Anonymous February 10, 2014 at 1:44 AM
if u interest.i can.
i am notagirlish and sexy,
i don't like girlish.
if u r notagirlish .contact me
မျှားနတ်မောင်လေး September 21, 2013 at 2:57 AM
အပေါ်က unknown အတွက် တယောက်ပေးမယ် သူ့နမည် က အသဲတဲ့ ကုလားဆင်လေး မိန်းကလေး လိုပဲချောတယ် သူ့ကိုအပ်လိုက် အကို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေလိမ့်မယ် ကျွန်တော့ အာမခံတယ် သူ့အကောင့်က love for love 2013 တဲ့ အပ်လိုက်နော် စိတ်တိုင်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်
aakl soe October 15, 2013 at 8:48 AM
Please mdy top guy add me
chinapunklay.@gmail.com ကိုအက်ပေးးကြပါ ခင်ချင်လို့ပါ
Peter König October 26, 2014 at 8:19 PM
Who wanna fuck me that hard like this video ... I wanna try big dick .....contact me 09420186635 from Ygn Only Big Dick Man